Apple Pencil sy Smart Keyboard, natao ho an'ny iPad Pro | Vaovao IPhone
Rehefa afaka fotoana ela, patanty maro ary tsaho maro, Apple dia nanapa-kevitra ny handefa kojakoja roa ho an'ny iPad izay nangatahan'ny olona hatry ny ela. Kitendry iray izay miasa ho fonony ary nantsoiny hoe Smart Keyboard, ary pensilihazo izay, mazava ho azy, niantso ny Apple Pencil izy. Ireto fitaovana roa ireto dia natao manokana ho an'ny iPad Pro ary natao hanomezana azy ireo fiasa mahomby sy mandroso kokoa.
Taorian'ny taona maro nandavana ny lozisialy, nandeha i Apple ary nandefa ny iray ho an'ny vokariny voalohany. Raha teo amin'ny toerany i Steve Jobs omaly, dia azo antoka fa hanome fanazavana tsy lojika mba hanamarinana ny antony nahatongavan'izao fotoana izao ho an'ny fitaovana fanampiny ho an'ny iPad. Ny Apple Pencil dia mihoatra ny pensilihazo nomerika. Ny tendrony manify indrindra, ny fahaizany manavaka ny tsindry atao, eny fa na ny fironana izay anoratanao, ary ny fahamaika tsy misy eo anelanelan'ny zavatra soratanao sy izay hita eo amin'ny efijery dia ataovy pensilihazo tena izy hanoratra na hisintona ny iPad-nao.
Araka ny hitantsika amin'ny horonantsary fampisehoana Apple, ny mari-pahaizana rehefa tsara ny fanaovana sary, ary ary koa ny mety hanovana ny hateviny amin'ny fiovan'ny tsindry, na ny famoronana aloka amin'ny alàlan'ny fametahana ilay pensilihazo fotsiny ataovy fitaovana ilaina tokoa amin'ny fanaovana sary na famolavolana asa izany. Saingy ilaina ihany koa izy amin'ny fanoratana tsotra fotsiny, na anotasyon ao anaty antontan-taratasy iray na koa famoronana rakitra feno miaraka aminy. Ary rehefa havaozina ny fampiharana mba hifanaraka amin'ny Apple Pencil dia hitombo ny fahafaha-manao.
Ny fiampangana feno ny Apple Pencil dia manome anao 12 ora fampiasana tsy tapaka, izany hoe mihoatra ny ampy handrakofana ny andro fiasana mahery vaika miaraka aminy. Saingy raha sendra lany bateria ianao dia tsy mora tsotra izao ny mamehy azy: esory ny satrony avy eo an-tendrony ambony ary misaotra ilay mpampitohy Lightning dia azonao atao ny mameno azy amin'ny iPad anao, mampiditra azy ao amin'ny fidiran'ny Lightning. Ny fiampangana 15 segondra monja dia manome anao asa 30 minitra, mihoatra ny ampy ho an'ny vonjy taitra. Ho azo amidy amin'ny fotoana mitovy amin'ny iPad Pro amin'ny $ 99 izy io.
Kitendry, fonony ary fononteny. Ny Smart Keyboard dia aingam-panahy avy amin'ny kitendry Microsoft Surface. Kitendry feno izay tsy manana bateria, switch herinaratra na fifandraisana Bluetooth. Kitendry feno tsy misy afa-tsy ny lakilen'ny fiasa amin'ny Mac keyboard rehetra, ary rakotra lamba tena henjana izay simba sy porofon-javatra. Ny fifandraisany amin'ny iPad Pro dia natao ara-batana tamin'ny alàlan'ny Smart Connector, miorina amin'ny iray amin'ireo sisin'ny iPad Pro, ary amin'ny alàlan'io fifandraisana io dia mahazo fahefana izy ary mandefa ny angona ho an'ny iPad. Mampanantena i Apple fa ny traikefan'ny mpampiasa dia hitovy amin'ny an'ny keyboard-ny, ka farany ny fanoratana amin'ny iPad dia mety hampitsahatra ny maha maritiora azy.
Toy ny Apple Pencil, ny Smart Keyboard dia tsy ho hita raha tsy amidy iPad Pro, ary napetraka amin'ny $ 169 ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Apple Pencil sy Smart Keyboard, natao ho an'ny iPad Pro
Hanohy ny asany steve izy ireo ary ny stylus, 1_ ny asa voalohany dia lasa, ity ny tim, asa 2_ no nilaza fa rehefa nanolotra ny iphone izy, ary nantsoiny ho fitaovana lehibe ifandraisana amin'ny efijery, ity pensilihazo ity dia ho an'ny ipad ary izy io dia fitaovana fanampiny, hanohy hampiasa ny rantsan-tànanao ianao. Tsotra toy izany.
Ankehitriny dia heveriko fa ny tena zava-dehibe dia ny hiasa ho an'ny pro na ho an'ny ipad rehetra ny pensilihazo.